वीएसटी-सिन्थेसाइजर। सबै भन्दा राम्रो भर्चुअल synthesizers
किनभने सबैलाई आफ्नै प्राथमिकता र आवश्यकता छ प्रत्येक व्यक्ति, आफ्नै व्यक्तिगत मापदण्ड अनुसार वीएसटी-सिन्थेसाइजर छनोट। तर, पछिल्लो केही वर्ष यो बजार मा कार्यक्रम को यस प्रकार को एक ठूलो संख्या तिनीहरूलाई बीच चयन गर्न भन्दा गुणस्तर झन् गाह्रो बन्ने छ देखियो। यस कारण बस सुविधा र प्रत्येक वीएसटी-सिन्थेसाइजर को लाभ, के यसको लाभ समान उत्पादन भन्दा कुन कुरा विचार गर्न सजिलो को लागि यो छ।
अडियो क्षति - फस्फोर
यो उपकरण सिर्जना लागि प्रोटोटाइप लोकप्रियता को आफ्नो शिखर समयमा एकदम peculiar साधन थियो जो alphaSyntauri छ। त्यसैले यो दिन मानिन्छ। दुई oscillators - यो वीएसटी-सिन्थेसाइजर को थपिएको संश्लेषण आधारित र यहाँ संरचना अत्यन्तै सरल छ।
हुनत आज निहित फिच को एक एकदम नम्बर छन्, अझै पनि सिन्थेसाइजर लचिलो रूपमा architectures, जो आफ्नो क्षमताहरु असर अन्य उपयोगिता, जस्तै विशेषता छ। तर, यसको प्रयोग शास्त्रीय आख्यान, तेज बास हल्ला, सार्दा सुराकी र बस पूर्ण गरेका छन् कि धेरै थोक को शैली मा विभिन्न एफएम घण्टी ध्वनि, पैड को संश्लेषण लागि बस आदर्श छ। यो वीएसटी-सिन्थेसाइजर अडियो क्षति मार्फत छ - फस्फोर यो दिन लोकप्रिय छ।
GForce - द Oddity
यो सिन्थेसाइजर कारण पुराना "फलाम को टुक्रा" को अति उच्च गुणस्तरीय अनुकरण प्रदान गर्दछ भन्ने तथ्यलाई लोकप्रिय छ। त्यसैले, यो उपयोगिता यसको अग्रणी स्थिति गुमाउनु छैन।
सबै भन्दा राम्रो वीएसटी-सिन्थेसाइजर विचार, यो कार्यक्रम यो 1971 देखि 1976 को धेरै लोकप्रिय थियो जो ARP Odyssey आधारित छ देखि, विशेष ध्यान दिनुपर्छ। को Oddity सिन्थेसाइजर को एक धेरै, धेरै राम्रो अनुकरण हो, र एकै समयमा यसको भर्चुअल सुविधाहरू यस्तो जो अन्ततः तपाईं धेरै रोचक ध्वनि सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ फरक पूर्वसेटहरू को संयोजन, रूपमा लाभ, एक नम्बर प्रयोगकर्ता प्रदान यसलाई टिप्पण लायक छ।
तपाईं एक क्लासिक सेन्थ अनुकरण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तब मामला मा त्यहाँ घटनाहरू दुई संस्करणहरु छन् - तपाईं बस मूल लागि असामान्य हो कि केही सुविधाहरू थप गर्न समकक्ष, वा एक जोखिम मिरर हुर्काउन उपलब्ध तपाईं फलाम सुविधाहरू लाइन मा जानुहोस्, र त्यसपछि र सुरु मोडेल, तर यो धेरै तपाईंले प्रयोग गर्ने कार्यक्रम रोचक बनाउँछ। हामी Minimonsta विचार भने, यो मामला मा कम्पनी GForce अझै पनि दोस्रो बाटो पछ्याउन, उपयोगिता आज वीएसटी-synthesizers को सबै भन्दा राम्रो हुन्छ पक्का गर्ने निर्णय गरे।
कार्यक्रम को हृदय मा मानक Minimoog छ, तर प्रयोगकर्ता Monsta मोड सक्रिय भने, यो सेटिङ चाहेको कुनै पनि गर्न LFO नियुक्त गर्न सम्भव छ, र विशेष प्रविधि धन्यवाद सजिलै 12 पैच बीच सजिलै सार्न सक्छ। यसरी, अन्ततः प्राप्त, उदाहरणका लागि, राम्रो सिन्थेसाइजर हावा साधन , धेरै पुराना चरित्र भएको वीएसटी, तर पछिल्लो कार्यहरु संग सुसज्जित।
यो रिसीभर पहिलो 2003 मा देखा पर्नुभयो र दोस्रो वीएसटी, Omnisphere पछि स्टीम इन्जिन मा जारी छ ट्रिलजी, भनिन्छ। को सिन्थेसाइजर को पुस्तकालय 34 जीबी छ र नमूनाहरू ई र ध्वनिक बास विभिन्न समावेश गर्छ, र प्रत्येक प्याच दुई तहहरू समावेश छ। आवश्यक भएमा, यो अप गर्न आठ फरक बहु पैच मा आयोजित गर्न सकिन्छ।
उपलब्ध उपचार को एकदम नम्बर, तर यो एक अत्यन्तै सरल इन्टरफेस छ कुनै पनि प्रयोगकर्ता सहज प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ, त्यसैले तपाईँले पहिले नै Trilian छ भने, यो तपाईं वीएसटी सिन्थबास खोज्न प्रयास कही चयन कि मान गर्न गाह्रो छ।
FabFilter - ट्विन 2
यो उपयोगिता यो उपकरण को एक विस्तृत विविधता छ कि धेरै अरूबाट अलग छ। यो वीएसटी साधन चार फिल्टर प्रजाति, तीन oscillators को एक विस्तृत श्रृंखला भइरहेको, साथै मडुलन सिस्टम अत्यन्तै स्पष्ट तपाईंको कल्पना को खुलासा लागि आधारमा सेवा गर्न सक्ने समावेश गर्नुहोस्। धेरै सिन्थेसाइजर आफ्नो प्रतियोगिहरु तुलनामा त ठूलो छैन कार्यक्षमता विशेषता छ भन्ने विश्वास गर्छन्, तर वास्तवमा यो पूर्ण खेल र कार्यक्रम को लागि प्रयोग गरिन्छ, र हामी विशुद्ध ध्वनि सर्तहरू को उपयोगिता विचार भने, यो निश्चित दिनेछु एक टाउको नै Sylenth1 गर्न सुरु गर्नुहोस्।
मूल उपकरण - FM8
80 का मा synthesizers प्रयोग गर्ने हरेक व्यक्ति, कि हरेक संगीतकार को सपना थियो जो एक यामाहा DX7 छ थाह छ। यो emulates कि FM8 सफ्टवेयर सिन्थेसाइजर, आज पनि पहिले नै पौराणिक, किनभने यो एउटा ठूलो आवाज मात्र छैन बन्न छ, तर पनि पूर्ण बुझे आवृत्ति मडुलन, यो यस प्रकारको अन्य कार्यक्रम मा फेला पार्न गाह्रो छ। र कि वीएसटी साधन छ के उल्लेख गर्न छैन।
यो पनि राम्रो परिणाम तपाईं एक सरलीकृत शासन हासिल गर्न सक्ने टिप्पण लायक छ, तर ती मानिसहरू संगीत सिर्जना प्रक्रिया तल्लीन गर्न चाहने लागि विशेषज्ञ मोड सबै सम्भावनाहरू प्रकट प्रदान गर्दछ।
ध्वनि शुल्क - Synplant
हामी सबैभन्दा मूल गिटार सेन्थ वीएसटी विचार भने, पहिलो स्थान निश्चित यसलाई Synplant दिनुपर्छ। एक समयमा ब्यान्ड को एक भाग जारी जो कारण Malstorm मानव श्रम यस उत्पादन, को विकास मा। यो उपयोगिता को मुख्य सार तपाईं केन्द्र मा मूल को शाखा को वृद्धि वृद्धि गरी बिस्तारै ध्वनि खेती गर्दै छ। यस कारण, यो सिन्थेसाइजर मा प्राप्त छन् भनेर ध्वनि प्राथमिकताको जैविक छन्।
धेरै निश्चित छैन साँच्चै रोचक र गुणस्तर संगीत सिर्जना लागि उपयुक्त थियो जो Z3TA, पहिलो संस्करण सम्झना, तर स्थिति, 2011 पछि नाटकीय परिवर्तन यो उपयोगिता को दोस्रो संस्करण। एक हात मा, विकासकर्ताहरूले मौलिक कार्यक्रम को इन्टरफेस परिवर्तन गरेको छ, अन्य मा - वास्तुकला को संश्लेषण मा कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन। तर, सबै यो बावजुद, ध्वनि गुणवत्ता उच्च, befits कुनै पनि आधुनिक सिन्थेसाइजर रहन्छ, र विशेष हाइलाइट मा oscillators काम मामलामा अतिव्यापक दोस्रो संस्करण हो।
हनन Papen - Albino 3
अनुसार विश्व-प्रसिद्ध ध्वनि डिजाइनर रोब Papen को विनिर्देशों संग कम्पनी LinPlug सिर्जना मा लगे थियो जो अर्ध-मड्यूलर सिन्थेसाइजर। यो कार्यक्रम को कार्य अत्यन्तै मधुर स्वर प्रत्येक अन्य संग विशेष मा, गायन सिन्थेसाइजर वीएसटी विचार अन्तरक्रिया र, तपाईं चार थरथरानवाला र जो एक अविश्वसनीय शक्तिशाली र महाकाव्य ध्वनि गठन गर्न अनुमति दिन्छ प्रत्येक प्याच, चार तहहरू पाउनुहुन्छ। यो बोर्ड मा यहाँ एक कठिन फिल्टर, साथै मडुलन विकल्प एक व्यापक विविधता छ भने गर्नुपर्छ। यसलाई पूर्ण मूल रोब Papen देखि 2100 पूर्वसेटहरू अनुमति भन्ने तथ्यलाई टिप्पण लायक छ, तर कुनै गल्ती बनाउन:, तपाईं धेरै प्राप्त गर्न सक्छन् आफ्नो ध्वनि धोखा प्रयास।
अचम्मको कुरा, भर्चुअल synthesizers बजार एक लामो समय को लागि यो कार्यक्रम, तर विकासकर्ताहरूले अझै पनि यो निर्णय गरेपछि, विश्व एकै समयमा तीन उपकरण, साथै superstructure जो एक उपकरण थप्न सक्छ वा मद्दत प्रस्तुत गरिएको छ, प्रभाव को एक किसिम। DCAM राम्रो तत्व भरिएको छ, यसको व्यापक मडुलन सिस्टम प्रयोग तर ध्वनि को एक विस्तृत विविधता को संश्लेषण गर्न सक्षम बनाउँछ। पहिलो नजर मा, यो सफ्टवेयर संग काम एकदम जटिल छ, तर यो सबै बुझ्न पर्याप्त छ, र तपाईं आफ्नो प्रयोगमा एक उत्कृष्ट सिन्थेसाइजर प्राप्त।
GForce कम्पनी 2003 मा उत्पादन र अति व्यापक थियो जो भर्चुअल एनालग ओस्कार मोडेल, रूपमा जारी गर्न यस वीएसटी-सिन्थेसाइजर निर्णय गरे। यो कार्यक्रम आफ्नो वास्तविक प्रोटोटाइप समान छ भनेर टिप्पण लायक छ, तर त्यहाँ फरक छ - एक अतिरिक्त polyphony र प्रभाव खण्ड। कारण त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरूबाट संयुक्त fitbeki, साथै ईन्जिनियरहरु को मूल विचार हो भन्ने तथ्यलाई गर्न, यो जो कुनै शङ्का कि प्रोटोटाइप तुलनामा अगाडि एक सांगीतिक कदम हो भन्नुभयो गर्न सकिन्छ दोस्रो संस्करण, धेरै, धेरै राम्रो छ। यो सबै बनाउँछ impOSCar2वास्तविक प्रोटोटाइप को बस एक उत्कृष्ट अनुकरण, तर पनि सिद्धान्त मा ठूलो सिन्थेसाइजर छैन।
सबैभन्दा herein synthesizers छलफल रूपमा यो उपयोगिता छैन रूपमा कार्यात्मक छ, र धेरै picky मान्छे पनि यो सिद्धान्त मा छ भनेर भन्न सक्छ, एक क्लासिक प्रस्तुति मा एक सिन्थेसाइजर, तर तपाईं बक्स बाहिर ठूलो आवाज प्राप्त गर्न चाहने प्राथमिकता भने, यो विकल्प निश्चित तपाईंलाई लागि हो । सुरुमा, यो उपकरण मा आधुनिक नृत्य संगीत प्रयोगको लागि प्रदान गरिएको छ। पूर्वसेटहरू, यदि आवश्यक, मापदण्डहरू एक नम्बर प्रयोग गरेर परिमार्जन गर्न सकिन्छ, तर, विशेष ध्यान गेट र arpeggiator जहाजमा योग्य हुनुहुन्छ। को मिक्स विन्डो प्रयोग गरेर, तपाईँले व्यक्तिगत पत्रहरू, जो प्रत्येक प्याच मा चार हुन सक्छ कन्फिगरेसन प्रदर्शन, साथै निर्मित प्रभाव को एक संख्या छ। यो सबै कार्यक्रम लोकप्रियता गुमाउनु छैन, कि आज तपाईं सजिलै धार मार्फत यो वीएसटी-सिन्थेसाइजर डाउनलोड गर्न सक्छ।
टन-ढाँचा र कसरी उहाँको काम के हो?
आधुनिक संचार प्रणाली को विशेषताहरु
बाइनरी: गणित र useability
पूर्वावलोकन: यो के हो?
Dislocation - कि के हो? dislocation मद्दत
भाडामा एक-बेडरूम अपार्टमेन्ट, होटल वा हस्टल?
समृद्धि र स्थिरता प्राप्त गर्न: पैसा सेन्ट Spyridon को प्रार्थना
इलेक्ट्रोनिक चुरोट कि हानिकारक छन्? फाइदा र धूम्रपान इलेक्ट्रोनिक चुरोट को बुरा
Gradskij किन बाँकी बारेमा विवरण "आवाजहरू"
Sokolniki मा सेन्ट व्लादिमीर अस्पताल: तस्बिर र समीक्षा
Dolphinarium मा रोस्तोव-ऑन-डन: विवरण, फोटो
Interdict - यो विवाद सुलझाने को एक तरिका हो। रोमन व्यवस्थामा Interdict को अवधारणा
व्यायाम प्रेस मा "crease" र stretching: प्रदर्शन प्रविधी। पेट मांसपेशीमा लागि अभ्यास
निर्देश लागि शुरुआती: प्लग-इन "Photoshop" कसरी स्थापना गर्न